Izimfihlo ze-Best Herb Grinder
Isikhathi sokuthumela: Aug-14-2020
I-grb ye-herb kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi ugwayi noma i-grinder yokhula isetshenziselwa ukunquma noma ukusika amakhambi noma izinongo. Kunokwehluka okuhlukahlukene kwe-herb grinder ngokuya ngenani lezicucu eliqukethe noma izinto ezenziwe ngalo noma inqubo esetshenziselwa ukugaya amakhambi. Nazi ezinye secr ...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: Aug-13-2020
YINI IBANDLA? Isigaxa yithuluzi elenzelwe ukugaya amakhambi nezinongo zibe ngamabhithi amancane. Ingasetshenziselwa ukugaya amakhambi ekhishini, kepha isetshenziswa kakhulu ekugayeni iziqubu zensangu zibe izinhlayiya ezinobukhulu obukhulu. Isigaxa esivamile sakhiwe ngama-halves amabili angahlukaniswa futhi abe namazinyo abukhali ...Funda kabanzi »
Ubuchwepheshe bokukhanya bezitshalo ze-LED buchaza ulwazi kanye nokusebenza kwemibhalo
Njengamanje, izinhlobo zamalambu ezitshalo emakethe zingahlukaniswa izizukulwane ezintathu: Isibani sezitshalo zesizukulwane sokuqala sinesilinganiso esimisiwe sobomvu nesibhakabhaka, esinamandla wokukhanya okuqhubekayo, namandla kagesi we-DC. Ukukhanya kwesizukulwane sesizukulwane sesibili se-LED yesizukulwane sesibili kukhanya okulungisiwe ...Funda kabanzi »